अति यौन उत्पीडनविरुद्ध नायिकाले खुलेआम कपडा खोलेपछि…. | Rajmarga
अति यौन उत्पीडनविरुद्ध नायिकाले खुलेआम कपडा खोलेपछि….
‘आफ्नो लडाईमा म बेसाहरा छु, किनभने मेरो पीडा कसैले देखिरहेको छैन, जसका कारण मैले यति ठुलो कदम चाल्नुपर्ने भयो र मैले सार्वजनिक रुपमा कपडा खोलेँ।’
यो भनाइ हो तेलुगु चलचित्रकी अभिनेत्री श्रीरेड्डी मल्लिडीको । तेलुगू चलचित्र उद्योगको कथित यौन उत्पीडनविरुद्ध आफ्नो विरोध प्रकट गर्दै गत साता हैदरावादको फिल्मी नगरीमा मूभि आर्टिस्ट एसोसिएसनअगाडि श्रीरेड्डीले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो कपडा उतारेकी थिइन् ।
श्रीरेड्डीका अनुसार आफ्नो कुरा सुनाउनका लागि र सरकारसँग आफ्नो मागको जवाफ लिनका लागि उनकासामु यही एउटा बाटो बचेको थियो । उनले प्रश्न गरिन्–जब चलचित्र जगतका मानिसहरु मलाई नाङ्गो तस्वीर र भिडियो पठाउन भन्छन् तब सार्वजनिक रुपमै किन कपडा नखोलौं ?
श्रीरेड्डीले आफ्नो करिअर एउटा स्थानीय टेलिभिजन च्यानलमा प्रस्तोताका रुपमा सुरु गरेकी थिइन् । पाँच वर्षपछि नै उनले चलचित्रमा काम गर्न थालिन् । उनले केही तेलुगू चलचित्रमा ससाना रोल गरिन् र यो घटनापछि उनी अचानक चर्चामा आइन् ।
अहिलेसम्म उनले आफ्नो यौन उत्पीडनको कुनै प्रमाण भने पेस गरेकी छैनन् । न त उनले प्रहरीमा उजुरी नै गर्न चाहेकी छन् ।
यसबाट प्रश्न उठिरहेको छ कि किन उनले मानिसहरुको ध्यान खिच्न र लोकप्रियता पाउनका लागि यसो गरिन् ? के मिडियाले उनलाई ‘सस्तो लोकप्रियता’ पाउनका लागि उक्साए ? उनले यो दुवै कुरा अस्वीकार गरेकी छन्।
तेलुगू चलचित्र उद्योग अर्थात टलिउड, हिन्दी र तमिल चलचित्र उद्योगपछि सबैभन्दा ठुलो चलचित्र उद्योग हो । केन्द्रिय फिल्म प्रमाणन बोर्डको वार्षिक रिपोर्टअनुसार सन् २०१५–१६ मा तेलुगू सिनेमाले २६९ चलचित्र बनेको थियो ।
‘कास्टिङ काउच’ निकै ठुलो मुद्दा हो, तर अक्सर यसलाई लुकाउने गरिन्छ र चलचित्र उद्योगका मानिसहरु यसविषयमा खुलेर कुरा गर्दैनन् । तेलुगु चलचित्रकी अभिनेत्री मावधी लताले सन् २०१७ मा बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन् कि–यो उद्योगमा यौन उत्पीडन अभिनेता र अभिनेत्रीहरुसँग एउटा प्रश्नको माध्यमबाट सुरु हुन्छ ।’ त्यो प्रश्न हो ‘यदि हामी तिमीलाई फिल्ममा रोल दिन्छौ भने त्यसको बदलामा हामीलाई के प्राप्त हुन्छ ?’
एउटा नयाँ गीतकारले पनि आश्चर्यमा पार्ने कुरा बताइन् कि हरेक पटक पुरुषको तर्फबाट मात्र होइन, बरु महिलाहरुको तर्फबाट पनि यसप्रकारको खतरनाक माग हुने गर्दछ । आफ्नो निजी अनुभव याद गर्दै उनले भनिन् कि एकपटक एक जना प्रोड्युसरकी श्रीमतीले उनीसँग उनका श्रीमानको सेक्सुअल माग पूरा गर्न भनेकी थिइन् ।
हलिउडमा पनि हार्वी वाइन्स्टिनविरुद्ध आरोप सार्वजनिक भएको थियो र सबैभन्दा पहिलोपटक न्युयोर्क टाइभ्समा प्रकाशित एउटा लेखबाट यसका बारेमा थाहा भएको थियो । यसपछि लगातार कयौ महिला सार्वजनिक भए कि वाइन्स्टिनविरुद्ध यौन उत्पीडनको आरोप लगाए । यद्यपि उनले यो सबै आरोप अस्वीकार गरे ।
अब श्रीरेड्डीलाई मूभि आर्टिस्टस एसोसिएसनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । संगठनका अध्यक्ष शिवाजी राजाले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने कि उनको गलत व्यवहारको आरधारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । उनले प्रश्न गरे कि श्रीरेड्डीले प्रहरीमा किन उजुरी गरिनन् र उनी केवल प्रचारका लागि बिना प्रमाण कुरा गरिरहेकी छन्।
तेलुगू फिल्म निर्माता दग्गुबत्ती सुरेश बाबुले भने कि श्रीरेड्डीले जुनप्रकारबाट आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने तरिका अपनाइन् यसले भारतका सबै महिलाको अपमान गरेको छ।
मूभि आर्टिस्ट एसोसिएसनको सदस्यताको मागका साथै श्रीरेड्डीले भनिन् कि सरकारले चलचित्र स्टुडियो बन्द गर्नुपर्छ । उनको आरोप छ कि यसमा अवैध गतिविधिहरु हुन्छन् र कथित रुपमा उनको पनि बलात्कार भयो ।
श्रीरेड्डीको पूरै प्रकरणमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। महिला अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था महिला चेतनाकी सचिव कट्टी पद्याले भनिन्–चलचित्र उद्योगमा यौन उत्पीडन छ । यद्यपि उनले जुनप्रकारको कदम चालिन त्यसका कारण हामी श्रीरेड्डीका साथ उभिन सक्दैनौ ।
यद्यपि केही मानिसले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो समर्थन श्रीरेड्डीलाई दिएका छन् । वैजयन्ती वसन्त मोगली एक चर्चित ट्रान्सजेन्डर कार्यकर्ता हुन् जो उनको समर्थनमा आएकी छन् ।
आफ्नो फेसबुक पोस्टमा उनी लेख्छिन्–उनले चलचित्र उद्योगमा साहसका साथ यौन उत्पीडनबारे कुरा गर्ने इतिहास रचेकी छन्, यसतो यसअघि देखिएको थिएन । हलिउडको ‘मी टु’ क्याम्पेनपछि यौन उत्पीडन र हिंसाका विषयमा भारतीय चलचित्र उद्योगको स्टैंडको सबैलाई प्रतिक्षा छ र आशा गरिएको छ कि भारतीय चलचित्र उद्योगले पनि यसमा कुनै सम्झौता गर्ने छैन । यसो भन्नु कि यस्तो त हरेक ठाउँमा हुन्छ । एउटा सुरक्षित काम गर्ने स्थान निश्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो ।
श्रीरेड्डीको पिवरोध गर्ने यो कदमबाट चलचित्र उद्योगमा यौन उत्पीडनको मुद्दा पुनः चर्चामा आएको छ । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: यसरी भइरहेछ विवाह गर्ने उमेरमै सम्बन्धविच्छेद !
Next post: नागले बाटो छेकेर मोटरसाइकलमै बास गरेपछि….. (फोटोफिचरसहित)